Mpandray anjara 'Olona hafahafa' Manatevin-daharana ny 'Maty Amin'ny Alavan'ny Andro' amin'ny tranofiara - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mpandray anjara 'Stranger Things' Manatevin-daharana ny 'Maty Amin'ny Alavan'ny Andro' ao anaty tranofiara
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyTranofiara (sarimihetsika)Lalao video
Mety mbola ho faty miadana tsikelikely isika eo am-piandrasana ny fahatongavan'ny vahiny Things fizarana 4 amin'ny Netflix. Saingy, hita fa nandritra izany fotoana izany ny an'i Netflix vahiny Things dia manampy votoaty bebe kokoa amin'ny tontolon'ny lalao malaza izaitsizy, Maty ny Ora.
Ny tranofiara farany avy amin'ny Maty ny Ora mitondra ny lohateny hoe "Moment of Truth Collection" dia manasongadina tarehin-tsoratra roa avy amin'ny vahiny Things miampita amin'ny tontolon'ny Maty ny Ora ary toa milay be izao. vahiny Things manatevin-daharana crossovers mampihorohoro taloha toy ny niantsoantso, Halloween ary A Nightmare amin'ny lalana Elm. Maty ny Ora DLC dia manolotra mpihaza vaovao foana miaraka amin'ny kalitao vaovao sy ny perks izay ampiasain'izy ireo hihaza ny rembiny vaovao.
Teo aloha sy voalohany vahiny Things DLC dia nanasongadina an'i Steve Harrington sy Nancy ary koa ny demogorgon. Io dia hanova hafahafa ny toetran'i Harrington ho Jonathan Byers.
Ny synopsis ho an'ny fanapotehana ny vaovao Zavatra hafahafa X Maty amin'ny antoandro toy izao ny atiny:
Ny atiny vaovao dia ahitana ny Set Legendary voalohany azo ampiasaina ho an'ny toetran'ny Stranger Things amin'ny alàlan'ny fanovana an'i Steve Harrington (amin'ny fisehoana fotsiny) ho iray amin'ireo mpilalao fototra ao amin'i Jonathan Byers. Ny atiny hafa dia ny Moment of Truth Collection, akanjo mifangaro sy lalao mifanentana be ho an'i Nancy Wheeler antsoina hoe Impulsive Activist Outfit.
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Sokajy:Matoanteny_amintsika&oldid=1,080 '' Mazava ho azy fa mila manana ny Stranger Things DLC ianao hampiasa azy ireo amin'ny lalao.
Ny tranofiara dia mampiseho an'i Jonathan Byers sy Nancy Wheeler ary koa ny akanjo ho an'i Nancy.
Tena tiako daholo ireny crossovers rehetra ireny. Heveriko fa ny iray amin'ireo tsara indrindra amin'izy ireo dia ny Halloween crossover. Ity iray ity dia tonga tamin'ny alàlan'ny stalker Michael Myers, Laurie Strode, haavo any Haddonefield ary misy tombam-bidy tena mahafinaritra ho an'ny stalker.
Crossover mahaliana ity ary mahaliana kokoa aza fa ity fanovana avy any Steve Harrington mankany Byers ity dia mbola voatanisa ho Harrington rehefa mampiseho mazava an'i Byers.
Ahoana ny hevitrareo lahy momba ny vahiny Things ary Maty ny Ora crossover? Mbola milalao ve ianao Maty i Dayllight? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Christopher Lee dia manana famoriam-bola 9 disc blu ray izay hivoaka amin'ny faran'ity volana ity! Vakio bebe kokoa ary manafatra mialoha eto.
A Nightmare amin'ny lalana Elmmaty tamin'ny antoandroDLCHalloweenNetflixPlayStationniantsoantsovahiny ThingsXbox
Mandoka ny fanahinao amin'ity fahavaratra ity ny fanadihadiana 'Arahaba ho an'ny Maty.'